19/06/2011(22h30) - RAMANANTSOA Tovo
TENY AZO ALINA 19 JUIN 2011 tamin'ny 22h30:
Rehefa avy nivavaka aho, nanamasin-tena tamin'ny omaly alina dia naheno feo mibitsika aho hoe isaia 60 vakiana, rehef nangataka fitarihan'ny fanahy masina aho raha feo avy aminy izany dia namaky aho dia ireo voalaza ireo no zavatra nolazainy, misy teny ho an'ny firenena azoko tao ary misy teny ho ahy manokana azoko tao koa.
Ny tompo kristy tsy mahela ny teny fikasany.AMENA.
Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao.
6 Ho feno ny rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efaha, samy avy any Sheba izy rehetra; volamena sy ditin-kazo mani-pofona no ho entiny, ary ny fiderana an'i Jehovah no teny mahafaly hambarany.
9 Fa Izaho no andrasan'ny nosy, ary ny sambon'i Tarsisy ho loha-lalana, Hitondra ny zanakao avy lavitra mbamin'ny volafotsiny sy ny volamenany, ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao sy ho an'ny Iray Masin'ny Isiraely, Satria efa nanome voninahitra anao Izy.